Aanaa Shirka - Wikipedia
(Shirka irra kan qajeele)
Biyya - Itoophiyaa Naannoo - Oromiyaa Godina - Arsii Aanaa - Sirka - Aanaan Sirkaa Godina Arsii keessatti argamti.Magaalaan Gobeessaa Kibba Bahaa Itoophiyaa keessatti argamti. Magaalli tuni kan itti argamtu Godina Arsii, Naannoo Oromiyaa yommuu ta'u, Laatituudii Kaabaan 07°37 fi Loongituudii Bahaan 39°30 ta'u qabdi. Olka'iinsa sadarkaa sirrii galaana gubbaa meetira 2353 irratti argamti.Gobeessi Magaalaa guddoo Bulchiinsa Aanaa Sirkaati.
Akkaataa mootummaa Naannoo Oromiyaa tti, magaalaan tun yeroo ammaa bakka buufata Telefoonaa fi waajjira tamsaasati. Yeroo dhiyoo as gahiinsa humna Elektrikii taate. Akkasumallee bakka ka'umsaa fi hirtuu magaalota ollaa isiiti. Fkn Magaalaa Madaroo fi Xiichoo.
Akkaataa Lakkoofsa Istaaksiin Ummataa bara 1999/2005 ibsutti Gobeessi baay'ina Ummataa walitti qabaa 10,170 qabdi. Kanneen keessaa Dhiirri 5,010 yommuu ta'u, 5,160 Dubartoota. Bara 1994 ALA tti, akkaataa gabaasa (National Census Reported) ibsutti Ummanni magaalichaa 5,689 ture. Kana keessaa 2,717 Dhiiraa fi 2,972 Dubartoota. Wikipidiyaa
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Aanaa_Shirka&oldid=36559" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 26 Amajjii 2021, sa'aa 11:02 irratti.